ပန်းချီတက်တူးထိုး - ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့အကောင်းဆုံးပန်းချီတက်တူး
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အမူပန်းချီ Tattoo ဒီဇိုင်းအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဇန်နဝါရီလ 3, 2017
အဆိုပါသှေးဆောငျအလှတရားအဖြစ်ဤဒီဇိုင်းများကိုလည်းအညီအမျှဖြစ်မည်နေသောအဓိပ္ပါယ်များသင်္ကေတ။ တစ်ဦးကတက်တူးထိုးတဦးတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်, အနုပညာတစ်ပုံစံလွန်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးင့်သောသူတို့အဘို့ငါတို့ချစ်၏စကားရပ်၏မှတ်ဉာဏ်, ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏သင်္ကေတဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပန်းချီတက်တူး၏အသုံးအများဆုံးပုံစံငှက်နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှား၏ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝ, မြော်လင့်ခြင်းအသှငျပွောငျးသှားနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လိပ်ပြာပန်းချီတက်တူးကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ကြာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သရုပ်ဖော်သော်လည်းနှင်းဆီတူသောပန်းပန်းချီတက်တူးမေတ္တာနှင့်အလှအပသရုပ်ဖော်သည်။ အသုံးအများဆုံးပန်းတက်တူးတစ်ခုမှာဘဝကိုဒုက္ခနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်သွားလာရင်းခွင့်သင်္ကေတဖြစ်သောလေဖြင့်လွ daffodil ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
စိတ္တဇအနုပညာဘုံနှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့မူပန်းချီ Tattoo ဖြစ်ကြသည်။ အရောင်များ၏ blotching နှင့် splattering တဦးတည်းရဲ့ခံစားချက်, အတှေးအသို့မဟုတ်ပင်အမြင်ကိုယ်စားပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများ၏အဓိပ္ပါယ်များအချို့ကလည်းယင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားအနက်ရသည်။
အမြိုးသမီးမြားအတှကျမူပန်းချီ Tattoo ဒီဇိုင်း
မိန်းကလေးများအဘို့မူပန်းချီလက်တက်တူး - အပိုင်း 1
မိန်းကလေးများအဘို့အရေအရောင်လက်တက်တူး - အပိုင်း 2
အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်မူပန်းချီ Tattoo ဒီဇိုင်း
ပန်းချီ၏နေရာချထား၏ရာထူး ထိုးကွင်းထိုး လက်ျာဘက်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကဲ့သို့အရေးပါသည်။ တစ်ဦးတက်တူးထိုးရှိခြင်း၏နေရာတက်တူးထိုး၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနောက်ကျော, အစာအိမ်, နံရိုး, ခြေထောက်နှင့်ပခုံးအဖြစ်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာများတွင်နေရာချတဲ့အခါမှာသေးငယ်တက်တူးထိုကဲ့သို့သောပြန်နားနှင့်ပင်လက်ချောင်းခြေဆစ်, လက်ကောက်, ကျောရိုးအဖြစ်သေးငယ်ဒေသများများအတွက်စံပြများမှာသော်လည်းပိုကြီးတဲ့တက်တူး, ကောင်းသောကြည့်ရှုပါ။
အချို့လူများကလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အပေါ်လူမှုရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ဒီအမျိုးအစားအများဆုံးလူတို့အဘို့, ကိုအလွယ်တကူဖွင့်ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည့်အရပ်တို့၌သင်သည်အတက်တူးထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ထည်, တင်ပါးဆုံရိုးဧရိယာအဖြစ်စံပြဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပန်းချီတက်တူးလျော်သောစောင့်ရှောက်မှုမယူလျှင်လျင်မြန်စွာလည်းညှိုးနွမ်းအကြောင်းမဲ့နေကြသည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်နေရောင်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အရေးကြီးပါတယ်အခါတိုင်းလိုအပ်သော touchups ရတဲ့ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါတက်တူးမင်များ၏စသဘောသဘာဝဒီတက်တူးစတိုင်ပင်ရှင်းလင်းဖြစ်လာအဖြစ်မူပန်းချီတက်တူးပေါ့ပါးအရေပြားပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာတက်တူးတစ်ခုဖုံးလွှမ်းသို့မဟုတ် un-tanned ဧရိယာရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဖြစ် Tattoo အဘို့အသွားရှေ့တော်၌သင့်လျော်သောမုန့်ညက်စားရန် ကိုယ်ခန္ဓာ စွမ်းအင်တက်တူးထိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်နှင့်လည်း Tattoo အစည်းအဝေးများရှည်အခါငတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးအချိန် hydrated ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားပါ။
ကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်တက်တူးခံရဖို့ဒေသပေါ် မူတည်. တက်ဆွဲထုတ်ဖို့အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်။
ထိုကဲ့သို့သော antibacterial ဆီသို့မဟုတ်ပိတ်ကျဲစအဖြစ် post ကို Tattoo လိုအပ်အပေါငျးတို့သ aftercare အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ ဒါဟာဝယ်ယူခံရဖို့အပေါငျးတို့သအခြေခံလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုကြိုတင်အဆိုပါ tattooist နှင့်အတူမေးလျှောက်သော် သာ. ကောင်း၏။
ပန်းချီတက်တူးအရောင် blotches နဲ့ splash ကနေဖန်တီးတက်တူးထိုးဒီဇိုင်းများ၏ထူးခြားသောပုံစံရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသောအရောင်များများ၏ထူးခြားတဲ့ရောစပ်ကြောင့်သိသိသာသာဆွဲဆောင်မှုစေသည်။ ရရှိနိုင်စတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်အတူ, ခွဲခြား၏အတိအကျရှာရန်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကနှစ်ခုကွဲပြားအမျိုးအစားများကိုနောက်ခံအနက်ရောင်အခြေစိုက်စခန်းရရှိနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားရသည်။
Black ကအခြေစိုက်စခန်းမပါဘဲမူပန်းချီ Tattoos -
အနက်ရောင်အခြေစိုက်စခန်းမပါဘဲမူပန်းချီတက်တူးအနက်ရောင်အကြမ်းဖျင်းသို့မဟုတ်လိုင်းအလုပ်မပါဘဲတက်တူးဒီဇိုင်းအဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်။ ပိုပန်းချီတူကြောင်းတက်တူးထုတ်လုပ်။ တက်တူးဤမျိုးအရေပြားနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ခွဲခြားရန်ခက်ခဲနေကြသည်တူကြောင်းအနားနွမ်းပါပြီ။ အဓိကအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဒီဇိုင်းထွန်းတောက်အရောင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အနက်ရောင်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူပန်းချီတက်တူးအချို့လိုင်းအလုပ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ အရောင်အဲဒီ line ကိုအလုပ်အပေါ်ပြုမိသည်။ အဆိုပါအရိုးလိုင်းအလုပ်အနက်ရောင်အခြေစိုက်စခန်းမပါဘဲသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားခြားနားသက်ရောက်မှုပေးပါသည်။ အများစုမှာ tattooists အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအနက်ရောင်အခြေစိုက်စခန်းထိန်းသိမ်းရန်။ ပထမဦးစွာအကြောင်းပြချက်အသက်အရွယ်ဖို့အနက်ရောင်အခြေခံအုတ်မြစ်များ၏စွမ်းရည်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်အနက်ရောင်နယ်နိမိတ်မရှိဘဲဒီဇိုင်းများပို့ဆောင်အတွက် tattooist ၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူကြိုက်များမူပန်းချီ Tattoo ဒီဇိုင်း
ပန်းပန်းချီ tattoos- ကတက်ကြွသောအရောင်အဆင်းများနှင့်ပုံစံမျိုးစုံလာအဖြစ်ပန်းပန်းချီတက်တူးအများဆုံးလူကြိုက်များကြသည်။ အများဆုံးဖန်တီးတက်တူးနှင်းဆီပန်း, ကြာ, နေကြာ, daffodils, tulips, ချယ်ရီပန်းတွေနှင့်နှင်း၏ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စေကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ပေးခြင်းတစ်ခုတည်းပန်းပွင့်အဖြစ်သို့မဟုတ်စည်းထားကြပါတယ်။
လိပ်ပြာပန်းချီတက်တူး- လိပ်ပြာကဤလုံးဝအနုပညာကိုကြည့်ရသောတက်ကြွအရောင်ပုံစံရှိသည်အဖြစ်မူပန်းချီတက်တူးအနုပညာအဖြစ်အသုံးပြုခံနေရများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ tattooist အများအပြားအရောင်များရောနှောနေခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအရောင်ပုံစံများဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။
Feather မူပန်းချီတက်တူး- ကစီးဆင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုသောနှစ်သက်အလှတရားရှိပါတယ်အဖြစ် Feather မူပန်းချီတက်တူးဆောင်လုလင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဖြစ်မည်ကြည့်ရှုပါ။ နွမ်းအစွန်းနှင့်အတူမျိုးစုံအရောင်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့မူရင်းကြည့်ပေးသည်။
ဝံပုလွေမူပန်းချီတက်တူး- Wolf ကမူပန်းချီတက်တူးအများအပြားအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်အခြားလူကြိုက်များဒီဇိုင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဂန္ဝံပုလွေတက်တူးမတူဘဲ, ပန်းချီတက်တူးကအချို့ကလည်းယင်းအဘို့အ enchanting အောင်ဒီဇိုင်းမှ lifelike အကျိုးသက်ရောက်မှုကယ်မနှုတ်နိုင်။
ငါးပန်းချီတက်တူး- ကစီးဆင်းနေသောအရည်အသွေးကိုရှိပါတယ်အဖြစ်ငါးတက်တူးထိုးသည်အခြားလူကြိုက်များတက်တူးဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူရေထဲမှာငါးတက်တူးထိုးပုံဖော်တင်ဆက်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနဲ့ splash ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပိုပြီးဒီကဗျာဖြစ်ကြသည်။
ငှက်ပိတမူပန်းချီ tattoos- ငှက်ပိတတက်တူးကမှုန်ဝါးက၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသက်ရောက်မှုနှင့် blotchy မူပန်းချီတက်တူးထိုးစေရန်လွယ်ကူပေးခြင်း, မြန်နှုန်းမြင့်မှာယင်း၏အတောင် flaps အဖြစ်ဖန်တီးရန်လှပသောတ္ထုဖြစ်ပါသည်။
ပန်းချီတက်တူးရိုးရာတက်တူးမှနှိုင်းယှဉ်နွမ်းဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါတက်တူးအပေါ်အလင်းအရောင်များ၏အသုံးပြုမှုအလျင်အမြန်နွမ်း၏ဒုက္ခမှထပ်ပြောသည်။ သငျ့လျြောသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရဖို့သေချာနေပါတယ်ဖြည်းဖြည်းသည့်အခါမူပန်းချီတက်တူးအသက်အရွယ်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်:
လက်ျာဘက်အနုပညာရှင်ကိုရွေးချယ်ပါ - ဒီတက်တူးစတိုင်အတှေ့အကွုံပဒေသာနှင့်အတူအနုပညာရှင်တစ်ဦးဟာတက်တူးထိုးသည်၎င်း၏လျင်မြန်နွမ်းတားဆီးထားတဲ့နည်းစနစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ယခင်အလုပ်၏နမူနာများကိုသူတို့ကိုတောငျးဆိုခွငျးအားဖွငျ့အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ tattooist ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါကြောင့်အချို့ touch နှင့်အနုပညာရူပလိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်လျော့နည်းအတွေ့အကြုံရှိ tattooist မူပန်းချီတက်တူးလုပ်လို့မရပါဘူး။
နေရောင်ခြည်ကနေဝေး Keep - နေရောင်အညီအမျှအဟောင်းအပေါ်မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုအဖြစ်အသစ်သောတက်တူးရှိပါတယ်။ နေရောင်ခြည်မှတက်တူးထိုး၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုပိုမိုမြန်ဆန်နွမ်းမှုပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့တက်တူးထိုးခြင်းမှနေရောင်ခြည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ဖို့မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနေရောင်မျက်နှာပြင်လိမ်း၏လျှောက်လွှာအများဆုံးအကြံပြုသည်။ အညီဆေးထည့်ခြင်းအားဖြင့်တက်တူးတက်ကိုဖုံးအုပ်ထားလည်းနွမ်းတားဆီးအတွက်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာတဲ့အရေပြား Keep - ဒါကြောင့်နေသူများကဖန်တီးသောအရေပြားကိုကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်အခါတက်တူးထိုး၏ဂုဏ်အသရေရှည်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအာဟာရဓာတ်စာ, လုံလောက်သောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့အရည်အသွေးကိုအိပ်စက်ခြင်းဟာတက်တူးထိုး၏လတ်ဆတ်သောသေချာအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ
moisturize - တစ်ဦးကဓါတ်ကိုပြန်လည် moisturizer, အ sagging တားဆီး wrinkling နှင့်အရေပြားထဲကအသေခံခြင်းနှင့်ကောင်းစွာဓါတ်ကိုပြန်လည်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အမွှေးအကြိုင်အခမဲ့အရည်အသွေးကောင်းအသားအရေ-အထိခိုက်မခံလိမ်း၏အသုံးပြုမှုဟာတက်တူးထိုး၏လျင်မြန်သည်အနာပျောက်စေသောအတွက်ကူညီပေးပါမည်နှင့်နွမ်းကာကွယ်တားဆီးဖို့။
ပွတ်တိုက်တားဆီး - မကြာခဏတိုက်မှကျရောက်နေတဲ့ဒေသများရှိတက်တူးဟာတက်တူး၏မြန်နွမ်းမှုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်တို့၏ခြေကိုသို့မဟုတ်တင်ပါး၏ထိပ်ပေါ်မှာတက်တူးချပြီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အကြံပြုသည်။
ပန်းချီတက်တူးသင့်လျော်အောနှင့်အရိပ်လိုအပ်သည့်အစဉ်အလာတက်တူးမှနှိုင်းယှဉ်ပါကမဆိုသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းများမပါဘဲလုပ်နေကြတယ်။ ပန်းချီတက်တူးဟာအနုပညာရှင်ဖန်တီးမှုအရောင် Blend နှင့်အတူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ။ အားလုံးဒီဇိုင်းများမူပန်းချီတက်တူး, အ tattooist မူပန်းချီ Tattoo အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးထောက်ပံ့ပေးဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
Tags:မိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူး လူတို့သညျအဘို့အတက်တူး ပန်းချီတက်တူး
ဟင်္တက်တူးKoi ငါးတက်တူးစိန်တက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးဆင်တက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးအစ်မတက်တူးrip တက်တူးချစ်စရာတက်တူးလက်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးလက်မောင်းတက်တူးမြှားတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးဂီတတက်တူးခြေကျင်း Tattoosဂျီဩမေတြီ Tattoosအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကငျးမွီးကောတက်တူးလက်တက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးနေရောင်တက်တူးစုံတွဲတက်တူးပန်းချီတက်တူးလတက်တူးကြောင်တက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးFeather Tattooနှလုံး Tattoosကျောက်ဆူးတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးတက်တူးထငှက်တက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးခြေလျင်တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးမျက်စိတက်တူးရေဘဝဲတက်တူး